Company Profile - Shanghai bilitere Co., Ltd
Logistic & Nchekwa
Service ọnụ ọchị
Bilitere ConstructionMachinery (Shanghai) Co., Ltd na-emekwa ụfọdụ na-emepe emepe, n'ichepụta andexporting ewu ígwè ọrụ na ebe nke ụlọ, Ngwuputa, ike andlogistic engineering. Ịchụ 8 isi ige, 38 ngwaahịa akara na morethan 1000 ụdị, bilitere bụ ike inye zuru ezu ngwá ngwugwu theclients si n'agbụrụ dị iche iche nke ndụ. The ụlọ ọrụ na-mgbe na-agba mbọ na-enye ourrespectable ahịa elu àgwà ngwaahịa na a pụrụ ịdabere na arụmọrụ, asọmpi price na ezi obi ọrụ huu bụla engineering oru ngo berun were were na na oge.
Ebe ọ bụ na 2003, anyị hadformulated atụmatụ nke internationalization na ndidi anọgide carryingout atụmatụ. Mgbe afọ nke ịzụlite, anyị ọma suppliedqualified ngwaahịa na magburu onwe ozi karịa mba 40 gburugburu theworld. N'oge gara aga afọ, bilitere ụlọ elu kreenu e ji wuo ọhụrụ shoppingmalls na center nke Bangkok, Thailand, bilitere bụ n'ụzọ rollers na graders werebusy maka ọhụrụ okporo ụzọ si Oran na Algiers, Algeria, The miners ndị diggingfor chi na-enyemaka nke bilitere na excavator. N'oge, Ndị mmadụ na-achọta moreand ọzọ bilitere na ígwè ọrụ na-arụ ọrụ ọnụ na ha, ha na-ahụ na RISEN'smachines otú ịgbanwe ụwa na mma ha ndụ.
Rube isi viewpointof "Ọ dịghị mma, naanị ka mma", bilitere na-mgbe na-emezu nke a echiche na ma productquality na ọrụ ahụ. Iji na-aghọta nke a na ebumnobi, bilitere njikwa theproduct quality nditịm. Ka ọ dịgodị, anyị na-guzobere a ukwuu-ọkà mechanicsteam na oversea ọrụ ozi gburugburu ụwa.
Dobe US A EZIOKWU!